Mahamasina - Anosibe : Filana ady tsotra izao!
2009-02-26 @ 23:12 in Politika
Tsy nampino ahy tamin'ny voalohany ny antso hanaovana sit-in teo anoloan'ny kianjaben'i Mahamasina androany alakamisy 26 febroary 2009 ho fanesorana ny PDS Guy Rivo Andrianarisoa noho ny maha-andro tsena azy indrindra. Isaky ny alakamisy manko ny tsena ao Mahamasina ao nefa dia izay no fanapahan-kevitry ny mpitarika ny tolona. Hevitra tena nosainina tokoa ve sa taitai-bombina tahaka ny iampangana ny filoha miova hevitra tampoka eny ampisidinana eny ihany koa? Misy zavatra kendrena mivandravandra be ao.
Voalohany, sao mba mifangaroharo manampy isa ny mpitolona ao ny mpiantsena sy ny mpivarotra tsy nahalala izay hitranga. Efa misy sahady manko ny fanahiana fa tsy hahazo olona betsaka mihitsy ry zareo dia aleo natao teo anoloan'ny kianja ny sit-in. Marihina mazava aloha fa tsy ao ny PDS notendren'ny fanjakana no miasa fa ery Tsimbazaza ery ka mampihomehy ihany ilay sit-in. Lasa avy hatrany ny fanontaniana hoe naninona raha natao tao anaty kianjaben'i Mahamsina mihitsy hahitana ny habetsaky ny olona? sa menatra? Tena indraindray mamelona fankahalana frantsay mihitsy ny ataon'ny mpampita vaovao frantsay milaza fa 3000 ny isan'ny olona nanao io sit-in io. Tomba-maso tsotra dia itarafana fa 500 ireny olona ireny ary raha be miaraka amin'ny mpanao tazan-davitra no mety hahatratra 1000 (izany hoe manahirana mihitsy aloha ny manisa olona an-dalambe manavaka ny mpitolona sy ny te-hijerijery e!). Fa raha tao anatin'ny kianjabe ry zareo dia mety hifampijerijery sy hifampamenamenatra ka mety hampisintaka ny hafa mahita ny hamaroany sy hampihomehy ny mpandalo hoe ireo ve ry zareo?
Faharoa, hanakorontana tsotra izao no tanjony matoa sady natao teo ivelany (an-dalambe) ny sit-in no andro tsena no anaovana azy. Toa sintonina tsikelikely ny mpanatrika hieritreritra hoe "aleo amboarina ireto mpivarotra tsy mety miala ireto" sady efa fahazarana tafara-dalana amin'ny tolona ataony rahateo moa ny mandroba (sy ny mandoro). Tsy miraharaha ny manodidina azy mihitsy ry zareo fa atatatata mafy ny fanamafisam-peo tahaka ireny hoe tsy misy hopitaly tsy misy sekoly manodidina azy ireo. Tenim-pankahalana ve izany soratako izany sa filazana ny marina sy ny zava-misy? Efa nisy aza moa ny fandrahonana ankolaka nahazo ny mpivarotra koa dia naleon'izay tsy te-ho very entana niala tsimoramora. Ny mpivarotra fanaka kosa moa dia miandry ny rariny sisa atao fa tsy mbola tonga tsinona ny fiara mitatitra ny entana mody. Mazava loatra fa nisy tamin'ny mpivarotra sy ny mpandeha anaty fiara fitaterana nandalo teo akaiky teo no voaroba. Tena jiolahy sy jiovavy tafara-dalana mihitsy ireto. Tena mbola misy manam-pahaizana amin'ny fanodikodinana ny sain'ny olona mihitsy koa ao ka nampihevitra ny sasany "hikarakara ny tsenan'Anosibe" indray. Moa va tsy araka ny efa nolazaiko tany alohaloha tany hoe ho avy koa ny handrobana sy ny handorana ny eny Anosibe? Foto-drafitr'asa vitan'ny filoha Ravalomanana ihany koa manko ireny.
Tsy nampoizin'ny mpitolona ny fahatongavan'ny Emmo-nat niditra an-tsehatra tsikelikely rehefa tonga ny atoandro (fiarabe iray sy pick up roa aloha no hitako), tsy taitra mihitsy nitsofoka tany anaty olona, hay haka ny "sono-mobile" sa hampijanona ny tabataba no tena tanjona. Nasain-dry zareo niala ny tao anaty fiara no fijery ilay miaraka amin'ny mpamily? Ny hafa kosa indray nanosika tsikelikely ny "mpitandro ny fandriampahalemana an'ny TGV". Minitra vitsy vao tonga saina ny mpitolona ka raikitra ny tabataba sy ny toratoraka. Niala tsimoramora ny Emmo-naty rehefa tsy azo izay nilainy, tsy taitra mihitsy izy ireo. Tampoka teo, nipoaka ny baomba mandatsa-dranomaso sy mankarenin-tsofina, tsy maintsy hoe homelohina indray ny Emmo-nat satria toerana manodidina sekoly sy hopitaly araka ny efa nolazaiko teo anie eo e! Nanavotr'aina ny olona teo; fa niverina ihany afaka fotoana fohy. Nisy nahita ary fa mbola misy Emmo-nat hafa tao amin'ny kaomisarian'i Mahamasina eo akaiky eo. Tadiavin-dry zalahy hotafihina ireo fa soa ihany fa tonga ny namany (nandeha an-tongotra kosa ireto). Nanao tifi-danitra ihany koa ny saiky hotafihina ka nampirifatra ny olona vorivory teo indray. Nisesisesy amin'izay ny fitifirana baomba mandatsa-dranomaso (toy ny basy manko ny fitaovana) ka izay misy olona mivorivory sy be fandrangitana dia "tifiriny soa amantsara. Tsy mahagaga raha voatosika hatreny amin'ny fisasahan'ny tambohon'ny St Michel ny mpandrangitra saingy tsy nanenjika ireny intsony ny Emmo nat fa ny lalana mankeny Anosibe no nasiany mpitandro ny filaminana.
Ny tolakandro manontolo (hatramin'ny 6 ora sy sasany hariva) no "nanadiovan'ny Emmo-nat" iny Lalana mankany Anosibe iny manomboka eo amin'ny rond-point Anosy ka mandra-pahatonga hatreny anoloan'ny tetezan'Anosizato. Ny tifitra baomba mandatsa-dranomaso no mifaninana amin'ny tora-bato. Mazava loatra fa ny hanosehana ny mpandroba no tena tanjona tao anatin'izany rehetra izany, sady misoroka ny fandrobana sy fandorana ny tsenan'Anosibe e! Marihina fa tsy taitra tsy mihazakazaka hanenjika olona mihitsy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny niasan'izy ireo fa manao dia milamina hatrany.
Fa hiverina kely tamin'ilay omaly alarobia indray aho. Soa ihany aho fa efa nanoratra taminareo fa nitondra delegasiona matanjaka ny TGV omaly nankeny amin'ny Le Hintsy Ambohimanambola fanatontosana ny fihaonan'ny roa tonta. Mazava loatra fa ny fahatongavan'ireto vahiny maro dia maro tsy voasa ireto no fialana nataon'ny mpitondra fanjakana tsy hanatrehan'ny filoha ny fihaonana sady nambaran'ny filoha Ravalomanana rahateo fa ny filohan'ny Antenimiera ny Me Jacques Sylla mihitsy no niantso azy tsy handeha eny ho fitandrovana ny ainy. Misy moa ny manoratra hoe tsy tonga tamin'ny fifampidinihana savaranon'ando atao ny maraina (alarobia io izany) ihany koa ny solontenan'i Andry Rajoelina (ny radio mada no nanambara) saingy tsy mahafantatra izay antsipiriany amin'iny resaka iny aho ka sady tsy afaka manamarina no tsy afaka mandiso ilay tokony hisy ny maraina. Ny hitako dia ny solontena manelanelana ny 20 - 30 niditra ny vavahady (ny mpikambana ao amin'ny governemanta an-dalambe sy ny mpiara-miasa amin-dRatoa Ratsivalaka) no azoko lazaina. Mazava loatra fa karazana paik'ady saiky hanapohana ny filoha no tanjona tahaka ny tsy hahalalana mandraka ity androany ny toerana saiky handehanana tamin'ny Sabotsy lasa teo. Mahavariana fa tsy nisy tamin'ny mpanao gazety, na tsy naseho vahoaka ny valinteny, nanontany an'i Andry Rajoelina ny antony nitondrany ireo olona tsy tokony ho ao anatin'ny delegasiona ireo. Zavatra iray nahatezitra ahy koa io "fanadinoana" io.
Misy ny zavatra tsikaritra tamin'ny tenin'ny Arshevekan'Antananarivo izay toa tsy dia hitako loatra ny nanamarika azy. Efa voambarako ihany moa ny antso nataony tamin'ny mpitandro ny filaminana hiaro ny olona sy ny fananany. Efa fampitan-kafatra ankolaka io ilazany fa mahalala ny zavatra kononkonina izy ka tsy manaiky ny hiray petsapetsa amin'izany. Fa ny faharoa tena tiako ampitaina dia ilay filazany manao hoe: "Misy fetrany anefa ny asa sy ny fahefan’ny mpanelanelana satria tsy mipetraka ho mpitsara izy". (1) Misy amin'iray amin'ny roa tonta no mikasa ny hanaovana ny fotoana ho karazana fitsarana, izany hoe manao izay tsy ifanarahana tsotra izao fa te-handany fotoana amin'izay tsy famahana olana velively; aleo ho an'ny Fitsarana ny asany fa tsy terena hanao ampamoaka ny FFKM. (2) Misy amin'ny ankolafy no manery ankolaka ny FFKM hiandany amin'ny mety ho fanadisoana ny ataon'ny iray na fanamarinana ny ataon'ny iray, rehefa tsy nanaiky ny FFKM dia lazaina amin'izay fa efa manana fiandaniana, paika hanaovana izay tsy isian'ny fifanarahana ihany koa izany. (3) mety ho be loatra ny fanerena mahazo ny tenany manokana koa naleony tsy miditra amin'ny fanelanelanana intsony, angamba matanjaka noho ny teny hoe "sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra" io antony manery azy tsy hanohy ny fanelanelanana intsony io. (4) Mety ho mahatsapa ihany koa izy fa tsy hisy raharaha ho vanona mihitsy amin'ny resaka ifanaovana amin'ny roa tonta, mety ho samy milaza ho mpitondra ny tenin'ny vahoaka. Izaho manokana dia efa tsy rariny mihitsy ny karazana fampitoviana lenta ny roa tonta nefa raha izay moa no nivoahan'ny ala-olana mba noleferiko ihany. Mazava loatra ao anatin'izany rehetra izany fa tsy mamely ankolafy iray velively ny Arsheveka raha naka iny fanapahan-kevitra iny araka ny fjeriko.
Koa raha politika fanorona no nampiharina nandritra ny fotoam-pihetsiketsehana dia niova ho lalao karatra "poker" indray izany rehefa natao ny fifampidinihana. Heveriko fa tsy mpahay momba izany "poker" izany ireto mpitari-pivavahana ireto (nefa asa moa!) ka izay no mety tsy ahatakarany izay tena ao an-tsain'ireto mpilalao andaniny sy ankilany ireto. Samy hitaintana fatratra indray izany ny rehetra amin'izay mety hitranga etsy Analakely amin'ny Asabotsy 28 febroary 2009 ho avy izao. Hosakanan'ny Emmo-nat ve ny "fitokonana" (fa tsy "fihaonam-be" an!) sa avelany amin'izao? Ho tonga maro ve ny mpanohana ny TGV sa efa manahy fa hisy ny fifandonana eo aminy sy ny mpitandro ny filaminana ka aleo mipirina any an-trano? Ho tonga mialoha ao ve ny mpitandro ny filaminana sa handroaka izay efa tonga mivorivory kosa? Raha izaho manokana dia mahita kokoa ny fahombiazan'ity paika faharoa mandroaka izay efa tonga ity... io hatrany manko tao ho ao no nahomby hatreto. Ny mpanohana ny ara-dalàna (ny filoha Ravalomanana) moa amin'ny ankapobeny dia maniry ny handravana io "fitokonana" io no sady nankasitraka rahateo izay nataon'ny Emmo-nat androany Alakamisy, ary raha azo atao aza dia misambotra ny lohandohan'ny mpisorona mihitsy aza. Dia Asabotsy izany mifankahita...
jentilisa, 26 febroary 2009
Tranon'ny minisitera Anosy: Tena vaky trano ofisialy izy ity!
2009-02-19 @ 21:42 in Politika
Faly dia faly aoka izany tahaka ny efa nahaongana fanjakana ireny ny mpanohana ny TGV ary nalahelo sy nitroatra tamin'ny fialan'ny mpitandro filaminana nihemotra fotsiny tsy nisy fifampikasihana (izany hoe tsy nisy fifanosehana velively) eo amin'ny roa tonta akory ny tsy mankasitraka ny fanjakazakan'ny governemanta an-dalambe. Mivandravandra manko fa tsy nampiasa na inona na inona tamin'ny fitaovana eny ampelatanany ny mpitandro ny filaminana; lany bala ve sa inona? Mazava loatra fa baiko no noraisiny dia tanterahiny, na misy tetika ambadika ao na misy fifanarahana miafina tsy takatry ny sain'ny sarambambem-bahoaka toa anay. Maro noho izany tamin'ny mpanohana ny fitondrana ara-dalàna no tsy te hipetrapetra-potsiny amin'izao toe-javatra mahasorena azy izao. Hoy kosa anefa aho, izay efa fantatrareo mpamaky ihany ny fironan-kevitro, hoe aza misioka fa mbola tsy tafavoaka ny ala!
Raha jerena amin'izao fotsiny eo amin'ny toe-tsaim-panohanana olona iray dia mahery eo amin'ny saikolojia (psychology) amin'izao fotoana anoratana izao ny TGV, nefa azoko lazaina fa voafandrika soa amantsara ry zareo. Alahatro tsikelikely ny hevitro: Tsy nikasi-tanana mpitolona politika mihitsy teto Antananarivo (tsy miresaka faritra hafa aho eto) ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny fomba fijeriko raha vao mahita izany ireo mpanao gazety vahiny mety ho nijery ny toe-draharaha teo Anosy androany dia ho gaga ka hanao hoe toa mitady ho tsara noho ny any aminay izy ity lehiretsy! Ny any amin'ny tany tandrefana aza raha tafahoatra ny ora ijanonanao eo amin'ny arabe, nefa ianao tsy betsaka manao ahoana no manelingelina ny fifamoivoizana dia azon'ny mpitandro ny filaminana tsara ny manala anao, na misintona anao, tsy misy mahazo midaroka ny roa tonta mandritra izany fotoana izany (fomba fijeriko tsy mbola nivoaka an'i Madagasikara sady tsy mieritreritra ny hiala eto velively izany). vokany, tsy nisy ny ra mandriaka izay mety ho notadiavina teto...
Manaraka izany, tsy nahita mpanao gazety vahiny nanaraka ny nataon-dry zareo tamin'ny famakiana trano izay ho avy intsony aho. Raha mba teo manko ry zareo nanatrika mivantana ny zavatra manaraka taorian'ny nialan'ny mpitandro ny filaminana tsy hifanandrina amina andian'olona mety ho nivandravandra tamin'ireo Malagasy nitodika tany aminy ny hivikivin-doha mety ho nataon-dry zareo vahiny ireo. Ataoko fa fahadisoan-kevitra mihoam-pampana ihany ny nitondra olona ampolony maro, indrindra ny mpanao gazety malagasy, hijery sy hitantara mivantana ny vakintrano izay hotontosaina, nefa izay moa no lalànan'ny mangarahara sady tahaka ny azo atao daholo ihany ny zavatra rehetra, eny fa na mangalatra aza, rehefa atao mangarahara tahaka izao. Ho porofo mitohoka amin'ny tendany daholo anefa ireo sary sy lahatsary ho hitan'ny besinimaro rehefa avy izay andro iray izay, satria mbola sarotra ny hiampanga olona mitonotonona ho izao na izatsy fa ilaina ho hita mihitsy ny zavatra nataony tamin'ny fikasana tao anatiny.
Fahatelo, nilalao ora ihany koa ny "mpanara-dalàna" nampivezivezy ny olona manofinofy hipetraka eo amin'ny sezan'ny minisitra sy alain'ny mpanao gazety sary eo ambonin'izany seza izany fa mety tsy ho tsapan'ny ao amin'ny governemanta an-dalambe izany. Fantatsika fa tao amin'ny minisiteran'ny filaminana anatiny sy ny minisiteran'ny atitany no nidiran'ny governemanta an-dalambe voalohany, narahin'ny mpanao gazety, sy izay mety ho mpanarakaraka fotsiny eny. Raha nojerena tety ivelany dia tahaka ny tsy misy miasa tao, nefa dia saiky tao amin'ny biraony avokoa ny mpiasa rehetra tao amin'ireo minisitera ireo, mbola ora fiasana ara-dalàna manko tamin'izany ora izany satria nialoha ny tamin'ny dimy ora (tokony ho tamin'ny efatra ora aza no nirava ny mpiasa amin'ireny toerana ireny araka ny fahalalako azy), entin'ny fitondrana ara-dalàna izany hanaovana tatitra rehefa tonga ny fotoana fa "mihodina soa aman-tsara mashinina" no tonga ireto olona ireto. Izany hoe eo amin'ny fomba fijery dia tsy ny avy amin'ny tetezamita velively no nibaiko ireo mpiasa ireo niasa teo tamin'ny ora fidirany ka toy ny manelingelina indray aza ny nidirany raha azo noheverina.
Mialoha ny hidirana ny tranon'ny minisitera anefa dia nihidy cadenas ny vavahady fidirana tamin'ny tranon'ny minisitera. Nolazaina fa haka vadintany ry zareo, fotoana maharitra mihitsy ny niandrasana ireo "vadintany" mirahalahy mianaka. olona nitondra fitaovana famakian-trano ireto nolazaina ho "vadintany" ireto. Nisy ny nangataka ny taratasin'ireto vadintany ireto saingy ny valin'izany fangatahana izany dia hoe: "tsy hamaky trano izahay fa hitsidika ny toerana fotsiny". Mazava loatra ihany koa anefa fa tsy maintsy misy ny taratasy avy amin'ny Fitsarana vao mifanaraka amin'ny lalàna ny famakian-trano atao, ny ivelan'izany moa ary izany ny tranga eto, efa tsy ara-dalàna mazava loatra ka mitovy amin'ny halatra ihany. Firy sahady izany ny fahadisoana vitan-dry zalahy? miditra trano tsy nahazo alalana izany ry zareo (ary tahaka izany na dia ny tamin'ny 1991 ireny aza) fa am-pilaminana araka ny filazan-dry zareo moa izany. Tsy nisy nampandroso ry zareo ary tsy manana fahefana handroso fa notanterahiny ihany.
Tonga teny amin'ny varavarana indray, indrindra fa teo amin'ny varavaran'efi-trano fiasan'ny minisitra dia naseho ny besinimaro tamin'ny alalan'ny fahitalavitra izany atao hoe famakian-trano. Tena nikatrokatroka tokoa moa ny maritoa sy ny pinces... mampahatsiahy ny fomba famakiana ny tranombarotra sy ny tranom-panjakana tamin'ny 26 sy 27 janoary 2009 mihitsy ry zareo a! fa ny eto moa ny tranon'ny minisitera sy ny varavaran'ny biraon'ny minisitra no vakiana. Dia ahoana izany no hitranga rehefa niala teo izy ireo? navela nidanadana fotsiny ve ny varavarana sa mba nisy fombany moa ny fanidiana ireny varavarana ireny? Tsy nisy nitatitra ny tamin'iny. Raha tena vadintany tokoa no nanao ny asa dia nohamarinina an-taratasy avokoa ny fitaovana rehetra mialoha ny hidiran'ny hafa nampandrosoin'ny tompontrano saingy inona moa no nitranga? Vao nivoha ny varavarana dia nibosesika avokoa ny rehetra tsy nisy anavahana. Mazava loatra fa tsy fantatra intsony izay mety ho fitaovana na zavatra rehetra nisy nitsaika tany anatin'ireny birao nibosesehan'olo-tsy fantatra maro ireny, efa karazana fandrobana sahady ihany no natao noho izany. Heloka hafa miandry koa izany amin'ny fotoanany. Ny fanalana ny sarin'ny filoha Ravalomanana teo amin'ny toerany moa manginy fotsiny.
Fahadisoana hafa ihany koa no vita tamin'ny minisitera roa ambiny satria efa nihoatra ny ora fiasana no nidirana tamin'ireo birao ireo. Efa dify manko ny tamin'ny enina ora. Moa tsy ireny mpangalatra ireny mihitsy nefa dia notanterahina ihany ny hiditra tamin'ireo toerana roa ireo. Nahoana hoy ianao? ka vao omaly ny omaly aho no nanoratra ny hoe "et un! et deux! et trois zéro!" e. Dia aleo mba atao hoe telo sy efatra izany ny baolina na baolina nenti-tanana aza ny nampidirana ilay baolina fandaka ary ny roa tamin'ireo aza baolina nampidirina ivelan'ny ora ara-dalàna. Ary ny tena nahavariana tamin'ity andro hariva ity, rehefa nahavaky minisitera efatra ry zalahy androany dia tsy nisy ny fandrobana sy ny vakitrano nihatra amin'ny sarambambem-bahoaka. Kisendrasendra sa? ka efa mody faly ry zalahy fa tsy nody kivy na tezitra tsinona koa. (leitia koa efa resy mbola bevava ihany!)
jentilisa, 19 janoary 2009
Vonona ho amin'ny ady an-trano ve isika? Are we ready for a civil war? Sommes-nous prÃªt pour une guerre civile?
Izay tsy miaraka aminay dia fahavalonay?
2009-02-09 @ 20:57 in Politika
Asa ianareo any ampitan-dranomasiina any raha hahatsapa ny mihatra amin'ny tsirairay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Taorian'iny fanafihana tsy mitam-piadiana nanosehan'ny sasany ny tsy mahalala loatra ny hanaovana azy eny Ambohitsorohitra iny dia tsy azo atao loatra ny mampiseho miharihary ny heviny, raha ny marina dia karazan'ny foana hatreo ny fahalalaham-pitenenana raha ny eto Antananarivo no resahina. Ny mibahana any an-tsain'ny olona aloha na dia tsy voambara mivantana aza izany dia mitovitovy amin'ny hoe: "Izay tsy manohana izay ataonay dia fahavalonay." Toy ny manao hoe izy ihany no marina, ny ataony ihany no mety... efa kazarany ahatra amin'ny tsirairay noho izany ny jadona sy ny fanampenam-bava.
Noho ny poa-basy sy ny grenady angaha dia nihamarenindrenina kokoa ny olona na ny andaniny na ny ankilany. Tsia, manampin-tsofina amin'izay hevitra tsy mifanaraka amin'ny azy angaha no marina kokoa. Niharan'izany ny Monsenera Odon Marie Arsene Razanakolona raha nitsapa alahelo tetsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny andron'ny alahady. Noteren'ny olona ampahibemaso ny lehilahy haneho ny fanohanana ny tolona tarihin'ny TGV saingy nihenahena. Tezitra ny olona ka raikitra ny horakoraka fanarabiana tsy ifandrenesana, saiky tsy hitany ny varavarana ivoahana. Tratran'ny demaokrasian'ny mpitaky demaokrasia amin'ny itiavan'ny mpitolona azy izy.
Nisedra izany ihany koa ny filohan'ny Antenimieram-pirenena raha nilahatra hanome ra teny amin'ny hopitaly Ravoahangy Andrianavalona. Any amin'ny tariky ny osy mainty manko rangahy io ka tsy mendrika ny hanome ra ny mpiray tanindrazana aminy izany. Ao amin'ny antokon'ny herin'ny maizina io Atoa Jacques Sylla io araka ny fihevitry ny mpitolona mampihevitra ny tenany ho antokon'ny ondry fotsy ka sao mamindra aretina na fahotana eo raha manome ra. Soa ihany fa sahy sedra izy, nefa eo ihany koa ny fitenenana vahiny manao hoe: "il a tout à gagner". Mety ho azo raisina ho kandidàn'ny fampihavanam-pirenena manko ny lehilahy rehefa afaka fotoana kelikely any... tsy ho gaga mihitsy aho aloha rehefa tonga ilay fotoana. Tsy zakan'ny sasany koa araka izany ny nahatongavan'ny Minisitra teo aloha Atoa Benjamin Davidson Andriamparany namangy sy nitondra fanampiana ny maratra satria tsy tao anatin'ny kajikajy politika angamba.
Ary hatramin'izao dia mila vaniny hatrany ilay noheverina ho ondry fotsy, tsy nanaiky hanao sorona ny tenany, fa aleo mahita "Isaka na Izaaka" voasaringotra teo amin'ny kirihitrala iny (na Isimaela kosa eo amin'ny finoan'ny silamo), hatao ilay sorona alatsa-drà... Oadray! tena tsy mahay lesona sekoly alahady mihitsy aho izany. Raha nandefa ny olona hirohotra ho eny Ambohitsorohitra manko ny lehilahy dia nieritreritra tao an-tsainy ilay tenin'ny Soratra Masina manao hoe: "Raha misy maka an'Ambohitsorohitra dia omeo azy ihany koa Iavoloha, tahaka ny efa nakany ny RNM ka nanomezanao azy ny TVM sy ny MBS sy ny Magro sy izay hafa tsy fantatro intsony..."
Izay no ela fa noho ny fananana maritiora, dia nentina nandehandeha manerana ny arabe, tahaka ny fanaon'ny palestiniana rehefa misy mpitolona novonoin'ny Isiraeliana ireo sorona ho an'ny ondry fotsy, oadray, demaokrasia aza fady indrindra, oadray tanindrazana manko e! ka nahavory olona maro tokoa, nohararaotina izany toe-javatra izany hilazana amin'ny maro fa manomboka rahampitso ny fitokonana faobe, ka efa nanakatona ny azy mandra-pahatongan'ny 1 martsa 2009 ny sekoly frantsay...tsss, resaka tsy misy ifandraisany izany ka! fiarovana aina fotsiny ny azy. Raha ny nolazain'ny fampahalalam-baovao samihafa no henoina dia rahampitso ihany koa no hotononina ny mpikambana ao amin'ny governemanta efa hoeken'ny mpanao gazety rehetra avy hatrany ho ara-dalàna satria avy amin'ny "vahoaka".
Marihina anefa fa efa niomankomana hiatrika izany sahady araka ny itarafana azy ny ao amin'ny Emmo Nat (na Emmo reg) niatrana sahady teny amin'ny kianjan'ny 13 mey io takariva hadiva ho alina io. Hampirohotra ny olona ve ny fandrenesana izany sa hampandositra ny olona kosa. Teny amin'ny manodidina teny ihany manko io tolakandro io ( alatsinainy 09 febroary 2009) tamin'ny 3 ora teo ho eo, dia nisy olona nihazakazaka (toa paikana jiolahim-boto koa ilay izy no tena marina!) avy tany an-kianja tany, fa nisaritaka daholo ny olona namonjy aina tamina zavatra tsy misy dikany (na tsy misy akory aza). Nitsofohany daholo izay rehetra azo nitsofohana na toeram-pivarotana na toeram-piasana misokatra na tranon'olona tsy voarindrim-baravarana. Tena mihorohoro ry zareo ny olona fandrao misy mitifitra avy any an-tafontrano any. [kodiarana vaky nipoaka hay moa no niatombohan'ity raharaha ity].Nefa izany tsapa izany dia ahafahana mitaratra fa hampihemotra ny olona ny fahitana ny mpitandro ny filaminana indray manodidina sy hiaro ny kianja, manahy aza aho fa ho avy ny tsaho hoe efa miatrana sy mandry any ho any indray ry zalahy niafina tao amin'ny tresor sy ny finance tamin'ny Asabotsy ireny... nefa moa ny tolona tsy maintsy mandresy hoy ny tigetra henoko vao haingana izay, ahatsiarovana ny fitenin'ilay mpitondra sady mpitari-tolona iray manao hoe "tsy maintsy mandresy ny tolona!" (na hihinana t.. aza ny olona, hoy ny fanampiny nataon'ny MaFana t@ 1976 - 1977 tany ho any, sa tsy fantatrareo mpahay tantara izany?). Nandalo teny aho io maraina 10 febroary 2009 io fa niala tsy hita ny Emmo nat. Noho ilay fihaonana mety hotontosain'ny mpanohana an-dRavalomanana rahampitso alarobia 11 febroary angamba ny antony raha izany.
Jentilisa, alatsinainy 09 febroary 2009
Manana mpahay lalÃ na ve Ravalomanana sy...?